Kenya oo Shababa u hanjabtay | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya oo Shababa u hanjabtay
NIAROBI-KEYDMEDIA Dowlada dalka Kenya ayaa sheegtay inay la dagaalamayso Ururka Alshabaab ka dib markii ay ku eedeeysay inay ka dambeeyeen falalka afduubka ah ee ka dhacay xerooyinka dalka Kenya
Wasiiradda arimaha gudaha Kenya George Saitoti, ayaa sheegay in Alshabbaab ay kula dagaalamayaan dalka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay inysan suuro gal aheyn in dlakaasi Kenya ay ka geystaan falal amni darro ah.
Dowlada Kenya ayaa dhawaan waxay ciidamadeeda ay soo dhoobtay xuduuda ay la wadaagto dalka Soomaaliya iyadoo oo sheegtay inay sugeyso amaanka xudduuuda.
Xerada Dhadhaab waxa dhawaan ka dhacay afduub loo geystay labo haween ah oo u shaqeynayay hayada MSF iyadoo aan ila iyo iminka aan la ogeyn halka lala aaday laakin masuuliyiinka Kenya ayaa ka shaki qaba in dadkaasi lala soo aaday Soomaaliya.
Wasiiradda arimaha gudaha Kenya George Saitoti ayaa sidoo kale sheegay in Alshabaab ay kula dagaalamayaan Dalka Soomaaliya isagoo xusay inay socdaan baaritaano ku aadan halka lala aaday shaqalihii MSF.
Hayadaha Qaramada Midoobay aya aku dhawaaqay inay hakiyeen shaqaayinkii ay ka wadeen xerooyinka Dhadhaab oo ay ku sugan yihiin qaxooti aad u badan oo ka cararay abaaraha iyo dagaalada ka taagan Soomaaliya ka dib markii la sheegay in arintaasi ay ugu wacan tahay dhinaca amaanka.